Tất tần tật 111 bài thơ chế tình yêu đầy ấn tượng sâu sắc nhất | Anybook.vn - Anybook
Tất tần tật 111 bài thơ chế tình yêu đầy ấn tượng sâu sắc nhất | Anybook.vn
Articles tononkalo fitiavana Ny tena manaitra sy lalina dia hahatonga anao hihomehy mafy. Amin’ity fitiavana miloko ity dia misy foana ny zavatra tsy azontsika vinavinaina. Noho izany, maro ny olona namorona karatra filalaovana mahatsikaiky sy mahafatifaty mba hanampiana ny olona hiala voly sy hiala sasatra hanadino ny zavatra tsy mahafaly eo amin’ny fiainana andavanandro. Andao hiara-manara-dia sy mahita izao!
Ny tononkalon’ny fitiavana dia tadiavin’ny tanora ho adiresy volamena hanampiana ny fanahin’izy ireo hilamina sy ho sambatra kokoa. Na dia tononkalo poetika aza izy ireo, dia mifandray amin’ny ambaratongam-pihetseham-po amin’ny fitiavana ary manana dikany lalina. Ndao hiaraka hanaraka e!
1. Misy afaka mamaritra ny teny hoe fitiavana?
Sarotra ve ny tolakandro
Olona roa miara-mandeha an-dalambe
Fitiavana ny fifampikasihan-tanana sy ny fifampikasihan-tanana
Fantaro hoe iza no mamaritra ny teny hoe fitiavana
Inona no mahasamihafa azy?
Rehefa mihinana azy ianao dia fantatrao fa mangidy sy mangidy
Ny tsiro mangidy dia fitiavana
Misy afaka mamaritra ny teny hoe fitiavana?
Hivoaka hihaona amin’ny endriny mahafinaritra
Vady lehibe, tratra be, tsiky mipi-maso
Ny fifohazana amin’ny alina dia tsy maintsy tia fitiavana.
2. Misy afaka mamaritra ny fitiavana ve?
Toy ny rahona manidina indray tolakandro
Amin’ny filentehan’ny masoandro tolakandro
Avelao aho ho raiki-pitia!
Fitiavana izay mahalala ny antony
Tonga amiko izany indraindray
Tsy misy fomba hahafantarantsika mialoha
Iza no mahalala hoe avy aiza ny fitiavana
Mba hahatsiaro ho tia sy halahelo
Noho ny anjara taloha nampanantenaiko
Dia nivory izahay!
Tsy misy afaka mamaritra ny fitiavana
Midika izany hoe oh Andriamanitro be
Tsy misy boky mahafeno izany rehetra izany
Ny teny hoe fitiavana dia tena ambony!
Manamby na iza na iza aho hamaritra ny fitiavana
Eny, tsara ny mamaritra ny fatra
Tonga sy mandeha toy ny rivotra izy
Mangatsiaka sy be rivotra ny alina….!
3. Iza no mahalala ny fahatsapana fitiavana
Mbola tsy nifankatia aho ka tsy haiko hoe ahoana
Rehefa tia, hono, dia hijaly
Ka tsy sahy mitia mandritra ny androm-piainako.. Fa.
Misy afaka mamaritra ny teny hoe oroka ve?
Inona no tsy mety amin’ny tapaky ny fahavaratra
Mafana ny andro ary tapaka ny herinaratra
Toy ny mifanoroka ny fihaonan’ny rivotra mangatsiaka.
4. Efa alina be tamin’izay sady rakotry ny zavona
Lasa ny volana fa mbola tsy milamina ny torimaso
Mifoha ve ianao sa mbola mifoha?
Mifohaza ary miresaha teny vitsivitsy
Ny ranomainty mainty sy ny taratasy fotsy dia mahita ireo teny nambaranao
Mindrana elatry ny vorona mba hamelatra ny elany
5. Amin’izao tontolo izao dia kintana hafahafa aho
Manirery aho eto ambanin’ny masoandro
manirery toy ny voninkazodia aho
Tsy misy mahalala ny fitiavako
Eo anatrehanao dia zazalahy roa taona aho
Ao aorianao aho no tompon’ny Gypsy
Teo amin’ny lalan’ny fiainana dia nampitony ny zava-drehetra izy
Teo amin’ny lalan’ny fitiavana no niankohofako teo an-tongotrao
6. An’arivony ny tovovavy tsara tarehy eto amin’izao rehetra izao
Fantatro fa tsy tsara tarehy tahaka ny olona rehetra aho
Tsy miteny aho hoe izaho no tsara tarehy indrindra
Fa nisy nianjera teo an-tongotro
7. Efa ela izay no tsy namelan’ny vary
Tsy mbola afaka nikasika ny “vovon’olona”
Ary vanim-potoanan’ny taro maro no lasa
Tsy mbola nisy izao na izao niaraka taminao
Ny vary mamony miandry ny tanana hotsimponina
Efa mamony ny vodiny, torana miandry
Io taro io dia vidiana imbetsaka isaky ny vanim-potoana
Miandrandra ny mikiakiaka indray andro any
READ Tuyển Tập Thơ Tết Hay | Anybook.vn
8. Mandray anjara amiko ny tsirairay
Inona no tokony hataoko mba hirosoana amin’izany?
Tokony hanohy handeha ve aho?
Avelao ny olona hahazo ny fony fa malahelo!
Dia raiso ny alahelo?
Tsy malahelo irery ny fitiavana!
Samy manome fitiavana kely ny tsirairay
Avelao aho hanana olon-tiako!!!
9. Mandry aho ka mijery an’i Dada malalako,
Mampinono ny zanany amin’ny mitataovovonana sy maraina ary alina ny reniny.
Nono mavokely mamy sy malefaka,
Hoditra fotsy malefaka boribory tratra sy sandry.
Ny hanitry ny voninkazo tsara tarehy dia mahamamo,
Niparitaka tampoka ny fofon’ny fanafody isan’andro.
10. Nirotsaka orana ny tokotany androany
Ny tovovavy tsara tarehy dia manao dokam-barotra tsara tarehy
Nihitsoka ny tongotr’ireo mpilalao rehetra
Nijoro teo amin’ny toerana iray fotsiny ary torana
Ahoana ny amin’ity mpilalao ity ….. maty aho…?
saina ambony saina eo ambanin’ny angano-drainao …..!
Tsy amin’izao fotoana izao
Enga anie ianao handry hatory ry zalahy… Mbola milalao
Tsy izao no fotoana hisakafoana
Nahoana ianao no niantso indray hanasa an’Andriamatoa Sao?
Jereo ny paiso… nanozongozona azy izy ary nikiakiaka
Mampahatsiahy azy ny clam…. Tsara loatra.
11. Fantatro fa poizina ny fitiavana
Vonoy ny foko amin’ny fotoana manirery
Nahoana aho no mitady foana?
Fitiavana ao anaty famoizam-po.
12. Misafidiana mandrakizay hahazoana andro iray
Hihaona amiko hanapa-kevitra ny hibaboka fitiavana
Ankizy roa mipetraka eo amoron’ny tatatra
Mihazakazaka eny an-dalana ny mpiasa sy ny tantsaha, feno vovoka
Toy izany koa ny fivarotana melon sy poara
Tsy nanonona ny resaka foibe mihitsy
Niresaka teny amin’ny manodidina avy hatrany izy
Andraso aho hihazona tanana tsy am-pitandremana..
Tsy mahagaga raha noraisiny haingana ilay izy
Mahay kokoa aho rehefa misintona ny tanako hiverina
Very hery izy ka nianjera tany an-kady
Rehefa nandady aho dia nahita anao nandositra hatry ny ela.
Raha vao niverina izy, dia niteny hoe:
13. Andriamanitro ô, tafahitsoka amin’ny fitondrana vohoka aho
Miverena ary lazao amiko fa manana akoho volamena ianao
Mihinàna sy mipetraha ary mitomania izany fahoriana izany
Matory maninjitra ny tongotrao te-handeha
Mitaiza anao, misaotra anao mirotsaka
Teraka tao amin’ny tovovavy manana dikany mitobaka
Ireo izay mijaly, ireo izay faly dia toy izany foana
Oh, ny anjarako, dia niraikitra tamin’ny fitondrana vohoka aho.
14. Misy kintana an’arivony eny amin’ny lanitra
Nahoana ianao no laharan’ny kintana mpamitaka?
Manana aloka an’arivony izao tontolo izao
Ahoana no ahafahako raiki-pitia aminao?
15. Misokatra indray mandeha ihany ny foko.
Raiso izy ary farano ny arivo taona.
Saingy tamin’izay fotoana izay dia hadinoko ny nanidy ny varavarana.
Niditra izy ary nanaraka ilay lehilahy hafa.
Ny andiana tononkalo fitiavana lalina sy misy dikany dia azo antoka fa hitondra fotoana hialana sasatra ho an’ny mpamaky aorian’ny ora fianarana sy asa mahasosotra. Raha liana amin’ireo tononkalo noforonina ireo ianao dia araho ny uct.edu.vn!
# Mandehana any an-tranoko, mpamily aloka.
Niandry dimy minitra vao nivoaka ny raiko.
Tononkalo eo anoloan’ny alika maromaro.
Strabismus ao ambadika, borosy fanosihosena…
READ 35+ Chùm Thơ Tháng 4 Mùa Hoa Loa Kèn Nhuộm Nỗi Nhớ Ai | Anybook.vn
# Tantaram-pitiavana mpianatra iray tolakandro
Olona roa mijoro eo anoloan’ny trano fidiovana
Tsy manana taratasy aho fa homeko anao
Mitsiky aho, mitalaho aho, fitiavana izany
# Fitiavana toy ny pancake.
Inona no mahatonga ny fatiantoka ho lena sakafo.
# Na aiza na aiza misy ny mahery fo
Misy adala eny rehetra eny
# Raha mianatra mafy ianao dia afaka mihinana saosy trondro misy kafe koa
Mianara mihinana voatabia tsara glided miaraka amin’ny saosy
Na dia mianatra mafy aza ianao dia mandro miboridana
Mianara midina sy mandro miboridana
Mianara tsara, mandroa ratsy ary ovay ny pataloha
Mianara mandro na manova ny pataloha taloha
# Mandehana mankany amin’ny lalana miampita ny aloky ny mpamily
Ny naoty fitsapana amin’ny taratasy dia jereo ny ankizy 3
Miondrika eo ambanin’ny pensilihazo
Miparitaka eny ambonin’izay mijery ny lanitra
Miala tsiny aho fa malahelo be
Ry mpampianatra malala, mijanona mandritra ny herintaona
# Tiako tsy hiposaka intsony ny masoandro
Avelao tsy ho levona ny loko
Te hamatotra anao indray aho
Aza avela hanaraka ankizilahy aho
Miposaka ny masoandro, mamirapiratra indray ny lanitra
Namatotra ahy, mbola mafana ho an’ny ankizilahy aho
Ankehitriny dia manana tandroka roa ny volo
# Ary ny zana-tsipìka soavaly
Fotoana hialana amin’ny soavaly sy hitifitra lalitra
Mitsikia, mitohoka ianao, fitiavana izany
# Betsaka ny tovovavy tsara tarehy eto amin’izao tontolo izao
Heverinao ve fa tsara tarehy ianao?
Toy ny nandaka ny anadahiko teo ambany tetezana
Mbola tsy tezitra izy, dia nampiakatra ny lohany… nanohy nandaka
# Indray mandeha ihany no misokatra ny foko.
Miditra ianao dia miditra koa ilay lehilahy hafa
# Kintana an’arivony eny amin’ny lanitra
# 8 martsa izao
Aza mandeha na aiza na aiza, mijanòna ato an-trano miaraka amiko
Tsarovy ny tsy ho mamo
Mamo ianao ka tsy mahazo na inona na inona
Anontanio izy raha tia pho na vary
Raha mihinana pho ianao dia te hihinana vary indray
Sarotra be i Choa
Eny, tsy maintsy misafidy ny tsy hahafantatra aho
Andro inona ianao no leo vary?
Avelao aho hihinana pho fa aza malahelo mihaino ahy
Nahoana ianao no miteny hafahafa?
Ny vary dia toy ny pho, tsy misy hafa
# Raha mba afaka manindry Ctrl+Z aho
Dia niaraka tamiko ianao izao
Tsy manirery ny mipetraka sy mi-scan
Safotry ny fo ny virosy.
# Alina sy alina mipetraka eo ambanin’ny hazavan’ny volana
Misy tovovavy erotika eo akaikiny
Mipetraha ary miresaka momba ny fitiavana
Mamo am-pitiavana, namihina tampoka ny andilana
Iza no nandre ny kisoa
Matahotra ny atrophy ny fanahiko aho
Misempotra mafy izy izao
Mandehana haingana ianareo roa lahy
READ Cảm nhận bài thơ Tường Vi Cánh Mỏng – nhà thơ Phú Sĩ | Anybook.vn
# Mihaona kely fa lasa mpivady
Manh no anarako, iza no anaranao?
Noraisin’izy ireo ny teny hoe Mai
Manampy ny teny 3 farany dia compieu – sheet
Sary taitra nifoha tamin’ny nofy
Adala daholo ny olona ary kamo aho
Hihaona amin’ny sipa mody manadaladala
Dia namela dibera ho anao ilay sipa
Firy taona no miaina fotaka kely
Nahoana aho no tsy mbola ilay fitiavako?
Nifoha tamin’ny lanitra aho izay
Na ny rainao aza efa virijina ankehitriny
Iza no hanambady amin’ny tavanao
Soa ihany fa tsy namely tehamaina azy
# Mid-Autumn Festival dia tena mampalahelo, Ramatoa Hang
Efa masaka ny henan’ny bitro natono
Avelao lentila nendasina
Toaka miaraka amin’ny hanitra mahery, misotro kely ny lalao!
Ny fisotroana dia tsy maintsy misy olona hiara-mihosotra
I Dadatoa Cuoi Ngo Cuong no milaza izany rehetra izany
Mamo tahaka ny ivoara ny vatako
Nahita an’izany i Ngo Cuong ary nihantona imbetsaka
Efa nahavita crochet ve ianao, nanery azy?
Torotoro ny anabavy mihantona eo ambanin’ny hazavan’ny volana!
# Mbola mitovy amin’ny taom-baovao taloha ihany ity taom-baovao ity
Mbola misy kodiaran-droa, mbola misy seza malalaka
Mbola mijery azy ireo mifanoroka
Mbola mijery ny masina mbola manao film irery =))
# Manana mpivady ny olona amin’ny Taom-baovao
Izaho irery eto amin’ny Taom-baovao
Olona manao vakansy Tet
Izaho irery eto amin’ny FACE :-<
Mbola mipetraka an-tserasera hatramin’ny mitataovovonana ka hatramin’ny tolakandro
Tsy dia hafa loatra ity Tet ity
Mbola mipetraka an-tserasera hatramin’ny tolakandro ka hatramin’ny alina
Tsy misy intsony koa ity taom-baovao ity
Mbola mijery afomanga eo amin’ny gorodona simenitra
# Raha pho aho
Izaho no ho ron-kena
Ny fiainana dia tadio
# Indray mandeha ihany no misokatra ny foko
Alao izy ary roahy
Tamin’ny fotoana nisarahanay, ny lalana roa
Nihazakazaka nitady ankizilahy aho
Afaka volana vitsivitsy dia nisaraka taminy aho
Rehefa mahita anao malahelo ianao dia miverena
Hadalana aho nanokatra ny varavarana fanindroany
# Tiako ianao tsy misy fitaka
Fitiavana iray metatra ny halavany dia misy sisa
Tiako ianao tsy matahotra fanaintainana
Dimy tao anaty vatam-paty no nanala ny tendany…
Mahasarika ny sain’ny mpamaky hatrany ny tononkalo fitiavana. Ny fitiavana dia zava-manitra eo amin’ny fiainana, saingy miaraka amin’ireo tononkalo ireo, na dia misy fiafarana mampalahelo aza ny fitiavana, dia mbola mahatsiaro ho maivana sy mandresy ianao. Araho ny uct.edu.vn hanaraka ireo lahatsoratra mahaliana sy miavaka indrindra ry namana a! Fitiavana!
Previous: Phân tích khách hàng mục tiêu | Anybook.vn
Next: 80 câu nói và câu nói hay nhất về người ăn chay để truyền cảm hứng cho người ăn chay trường | Anybook.vn